Qalalaasaha Libya: “Ciidanka Soomaaliya ma ahan calooshood u shaqeystayaal Libya u socda” | Hangool News
Qalalaasaha Libya: “Ciidanka Soomaaliya ma ahan calooshood u shaqeystayaal Libya u socda”
July 22, 2020 - Written by Hangool News 1
Hangoolnews:- Waxaa dhowaanahan la isla dhexmarayay in Soomaaliya ay ciidamo u direyso dalka Libya si ay u “caawiyaan” kuwa Turkiga.
Hadaba, waxaa jiray bogag internet ah oo lagu qoray in Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ay ciidamo u direyso Libya “kuwaas oo gacan ka geysanaya xasilinta dalkaas”.
Qoraalka sawirka,Wasiirka Arrimaha diabdda ee Soomaaliya, Axmed Ciisa Cawad
Wuxuu intaa ku daray: “Wararka meelaha lagu qorayo ee dacaayadaha ah waxba kama jiraan”.
Qoraalka sawirka,Turkiga ayaa saldhig ciidan oo wayn ku leh Muqdisho halkaas oo lagu tababaro ciidanka xoogga Soomaaliya.
Qoraalka sawirka,Madaxweynaha Aljeeriya, Cabdelmajid Tebbuune.
Maamulka dalkaas waxay sheegayaan “in furaha nabadda ee Libya aysan ahayn Saliidda iyo Shidaalka iyo faragelinta arrimaha gudaha ee dalkaas lagu hayo iyo xaaladda ay wajahayaan shacabka. Sharciyadda dowladnimo ee Libya – baarlamaanka iyo maamulka guud – oo eegaya danaha dalka, waa furaha dhabta ah ee maamulidda waddanka iyo ilaalinta badqabka shacabka”.
Qoraalka sawirka,Sisi ayaa booqasho ku tagay saldhigga ciidamada cirka ee Masar ee ku dhow xadka Libya
Qoraalka sawirka,Ciidamada Turkiga ayaa caawinaya dowladda ay beesha caalamka aqoonsan tahay ee Libya
Faay Cali ‘halyeeyadda’ iyada iyo seeygeedii la wada dilay